War-Saxaafadeed: U-doodayaashu waxay ku baaqayaan waddo caddaalad ah oo loo wada dhan yahay oo loo maro muwaadinimada maaddaama CO reps ay saxeexayso biilka shaqaalaha muhiimka ah - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > War-Saxaafadeed: U-doodayaashu waxay ku baaqayaan waddo caddaalad ah oo loo wada dhan yahay oo loo maro muwaadinimada iyada oo wakiillada CO ay saxeexaan biilka shaqaalaha muhiimka ah
Denver, CO - Toddobaadkii la soo dhaafay, Sharciga Jinsiyadda ee Shaqaalaha Muhiimka ah waxaa lagu soo bandhigay Golaha Wakiilada oo ay soo gudbiyeen Rep. Castro iyo Lieu, iyo Golaha Guurtida Sens. Padilla iyo Warren. Sharcigu wuxuu dhigayaa ilaa 5+ milyan oo shaqaale muhiim ah oo aan sharciyeysnayn waddooyinka loo maro dhalashada. Toddobaadkan, Senator Hickenlooper wuxuu ku biiray Senator Wakiilka DeGette oo si rasmi ah u wada-ololeynay sharcigan muhiimka ah, halka Xisbiga Dimuqraadiga ee Colorado uu ugu yeeray dhammaan ergada Colorado inay ku soo biiraan wada-hawlgalayaal.
Soo bandhigida sharcigan ayaa ah mid si toos ah uga dhashay sanado badan abaabul iyo abaabul bulshooyinkeena soo galootiga ah. Muhaajiriinta ku sugan Colorado iyo guud ahaan dalka waxay codkooda maqleen ilaa caasimada qarankeena, ”ayay tiri Lisa Durán, oo ah agaasimaha fulinta ee Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado. "Waxaan bilaabaynaa inaan aragno miraha dadaalkan."
Laga soo bilaabo xilligii masiibadan ay bilaabatay sanad ka hor, malaayiin shaqaale muhiim ah oo aan sharciyeysneyn ayaa u shaqeynayey si hagar la'aan ah, sidii ay horeyba u haysteen sanado badan, beeraha, dukaamada cuntada, isbitaalada, jikooyinka, xarumaha wax lagu qeybiyo, iyo meelo kale oo badan oo muhiim ah si loo hubiyo in cuntadeena , daryeelka caafimaadka, iyo nidaamka gaadiidku wali waa sidey, badiyaa waxay qatar ugu jiraan caafimaadkooda. Hase yeeshe, xaqiiqda qadhaadh ayaa weli ah in kasta oo ay ku darsadeen waxyaabo aan caadi ahayn, haddana lama siinayo ilaalin, fursado, ama nabadgelyo la mid ah tan deriskooda.
Wendy Howell, oo ah Agaasimaha Gobolka ee Xisbiga Qoysaska Shaqeeya ee Colorado, ayaa xustay, "Cadaalad darrada shaqaalaha aasaasiga ah ee aan sharciga lahayn ayaa wajaha - hanjabaadda masaafurinta ee waddanka ay sida joogtada ah ugu halistaan ​​caafimaadkooda si ay u sii socdaan - waxay helayaan dareen qaran oo aan horay loo arag, labadaba warbaahinta iyo Golaha Koongareeska. Waa inaan u dabaaldegnaa tan, isla mar ahaantaana aan aqoonsanno in xallinta sharci dejinta ee ilaa hadda la soo bandhigay ay ka muuqdaan baararka qoto dheer ee dhaawacaya. ”
Baararka ayaa waxaa ka mid ah xadgudubyo hore iyo xiriir yar oo lala yeesho nidaamka sharciga dambiyada Kuwaan “carve outs” ama ka-reebitaannada xaddidaya kuwa u qalmi kara dariiqa biilka ee muwaadinimada, ayaa ka xannibaya kumannaan qof deggenaansho rasmi ah oo ku saleysan sharci darro iyo inta badan isdhexgalka yar ee caddaaladda dembiyada nidaamka. Rochelle Galindo, oo ah Agaasimaha Siyaasadda iyo Abaabulka ee Waxqabadka dadka ee Colorado, “saan-saareyaasha noocan oo kale ah micnaheedu waa dadka aan muwaadiniinta ahayn ee sameeya xitaa dembiyada fudud waxaa lagu ciqaabayaa laba jeer: mar nidaamka sharciga dembiyada, ka dibna mar kale laga reebay wadada loo maro muwaadinimada. ”
Qodobada Draconian ee kuwan oo kale ah waxay horeyba u keeneen saameyn dheer oo waxyeello u leh bulshooyinkeenna - taageerayaasheenna xubnaheenna iyo taageerayaasheenna waa la waayey. Halkii laga dhisi lahaa wadiiqooyinka muwaadinimada oo ay ka buuxaan boholo, hareeraha iyo dhamaadka, waxaan ka codsaneynaa Congress-ka inay soo bandhigaan aragti mideysan oo loogu talagalay waddo loo dhan yahay, hufan oo hufan oo lagu gaaro heerka. ayay tiri Jennifer Piper, Agaasimaha Abaabulka ee Guddiga Adeegga Saaxiibbada Mareykanka.
Lisa Durán way ogoshahay, “Dhamaan waftiga Colorado ee jooga Washington DC waa inay marka hore ku biiraan Senetarada Hickenlooper, Bennet, iyo Rep. DeGette si ay u wada kaashadaan sharcigan ka dibna waa inay ka shaqeeyaan sidii looga dhigi lahaa mid loo wada dhan yahay. Hindise sharciyeedkani waa tallaabada koowaad ee xiisaha leh ee xagga caddaaladda, isla mar ahaantaana, waxaan go'aansanay in aan u degno wax aan ka yarayn dariiqa saxda ah ee muwaaddinnimada muhaajiriin kasta oo ku nool Mareykanka. ”
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) waa isbahaysi goboleed ku saleysan xubinnimada xubnaha muhaajiriinta, iimaanka, shaqada, dhalinyarada, bulshada, ganacsatada iyo ururada asxaabta ah oo la aasaasay sanadkii 2002 si loo wanaajiyo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga iyadoo laga dhigayo gobolka Colorado mid soo dhaweyn, soogalooti saaxiibtinimo leh.
Guddiga Adeegyada Saaxiibada ee Mareykanka (AFSC) waa urur Quaker u heellan adeegga, horumarka, iyo barnaamijyada nabadda adduunka oo idil. Shaqadeenu waxay ku saleysan tahay aaminaadda qiimaha qof kasta, iyo iimaanka awoodda jacaylka si looga adkaado rabshadaha iyo caddaalad darrada.
Waxqabadka Dadka Colorado (CPA) waa xubin xubin ka ah, urur cadaalad jinsi oo loogu talagalay dhisida awooda xukunka ee Colorado. CPA waxay ku dhistaa awooda iyadoo abaabushay codbixiyaasha, dooraneyna dadkeena xafiiska, la xisaabtanka saraakiisha la doortay iyo shirkadaha, iyo ka shaqeynta sidii dadka looga hor marin lahaa faa'iidada.
Xisbiga Qoysaska Shaqeeya ee Colorado waxay u heellan tahay ilaalinta qiyamka horumarka leh iyadoo loo marayo ficil toos ah iyo guusha doorashada. Hadafkeenu waa inaan xoojino dadka, ururada, iyo bulshada si ay u dhisaan dhaqdhaqaaq dadweyne oo kaladuwan oo haween ah kaas oo xoojiya dimuqraadiyada iyo hormarinta cadaalada jinsiyada, bulshada, iyo dhaqaalaha.